January 2017 – CRM
KUALA LUMPUR: Several OIC member states have pledged their contributions today following Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak’s pledge of RM10 million for the Rohingya. Foreign Minister Datuk Seri Anifah Aman said Indonesia and Pakistan have pledged about US$5 million worth of rice, while others have promised to discuss and announce their contributions later. […]
Posted on January 19, 2017 Author swelsone	Comment(0)
မြန်မာအစိုးရဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်က မွတ်ဆလင်တွေအပေါ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေတာတွေ ဖုံးကွယ်ဖာထေးဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက ဇန်နဝါရီလ (၅) ရက်နေ့ ဒီကနေ့ ဝေဖန် လိုက်ပါတယ်။ မောင်တောဒေသ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာမှာ… လူနည်းစုမွတ်ဆလင်တွေကို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်တာမရှိဘူးလို့ ရေးသားဖော်ပြထားတာကို ထောက်ပြီး အခုလိုဝေဖန်လိုက်တာပါ။ HRW လူ့အခွင့် အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အာရှရေးရာ ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူး Phil Robertson က… အရင်စစ်အစိုးရ လက်ထက် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ ဒုသမ္မတဦးမြင့်ဆွေကို ပွဲထုတ်ထားတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဟာ မိမိတို့ စိုးရိမ်ထားသလို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အစိုးရရဲ့ ဖုံးဖိဖာထေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးလို ဖြစ်လာ နေတယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။ ဗလီအရေအတွက် အများအပြား ရှိနေတာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ […]
Posted on January 6, 2017 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
France reiterates its deep concern over the unacceptable violence perpetrated against those belonging to the Rohingya minority in Burma and calls for an end to that violence. We emphasize that it is the Burmese authorities’ responsibility to protect civilian populations. It is vital to fully investigate that violence in the most transparent, impartial way, and […]
Posted on October 22, 2018 Author rightsforburma rightsforburma